कठोर ब्रत बस्ने महान पर्व जितिया सुरु, किन गरिन्छ कठोर व्रत ?, को हुन जिमूतवाहन ?
जितिया पाविन बड भारी, धिया पुताके ठोकि सुतौलन्हि अपने खैलैन भरि थारी
जनकपुरधाम, भदौ २४ : तराई मधेस लगायत मिथिलाञ्चलमा आजदेखि जितिया पर्व विधिवत रुपमा सूरु भएको छ । तराई मधेस सहित मिथिलाञ्चलमै बुधबार आमाहरुले नहाय खाय गर्दै माछ मरुवा (माछा र कोदोको रोटी) समेत खाएकी छन् । एकदमै कठोर भारी पर्वको रुपमा प्रसिद्ध जितिया व्रत बस्नु अघि प्रथम दिन महिलाहरुले घिरौलाको पातमा भगवान् जितमाहन र दिंवगत पितृलाई प्रसाद चढाइ चिउरा दही र अमोट (पाकेको आँपको रसबाट तयार हुने खाद्य पदार्थ) खाएर पर्वको सुरुवात गर्दछ ।
जनकपुरधाम सहित ग्रामिण भेकमा समेत सोमबार सयौँ व्रतालु महिलाहरुले नजिकको तलाउ, पोखरी वा नदिमा स्नान गरेर जिमूतमाहनको कथा सुन्ने परम्परा रहिआएको छ । व्रत बस्नु अघिल्लो दिनमै व्रतालुले विभिन्न जलाशयमा स्नान गरी घिरौलाको पातमा पिना, सख्खर र तोरीको तेल चढाउने प्रचलन रहिआएको छ । देवतालाई चढाएकै तेल मध्येबाट आ–आफ्ना शाखा सन्तानलाई टाउकोमा दल्ने परम्परा छ ।
भोली (विहिबार) विहान ४ बजे नै उठेर व्रतालु महिलाहरुले घिरौलाको पातमा दही च्यूरा र सक्कर चढाउँदै आफ्ना सन्तानलाई खुवाउने प्रचलन रहिआएको छ । यदपि यस वर्ष बुधवार राती १० बजे नै सो विधी गरिने छ । व्रतको पहिलो दिन पूजापछि कोदोको रोटी, नुनीको साग र माछा खाने चलन छ । जितिया पूजन विधिअनुसार बिहान काग कराउनु भन्दा पहिल्यै व्रत बसेकी महिलाले अँगुठन सम्पन्न गर्नुपर्छ अर्थात् केही खानेकुरा ओठमा लगाउनुपर्छ ।
सन्तानको दीर्घ जीवन, पुत्र प्राप्ति तथा पारिवारिक सुख शान्तिका लागि मनाइने जितिया पर्वको धार्मिक सांस्कृतिक तथा तान्त्रिक महत्व समेत रहेको साँस्कृति विद्वहरुको कथन छ । ब्रतालुहरू व्रत प्रारम्भ गर्नुभन्दा पहिले सबेरै सूर्य उदाउनु भन्दा अघि नै पितृलाई झिमनीको पातमा दही, च्युरा लगायतका सामग्री चढाएर आफै पनि ग्रहण गरी पानी खाने चलन रहेको छ,जसलाई अँगुठन भनिन्छ। अँगुठन घरको अन्य सदस्यहरू समेत अगुँठन गर्ने गर्दछ ।
जितिया पर्वमा आश्विन कृष्ण सप्तमी तिथिका दिन वर्तालु स्नान गरी चोखो हुने र अष्टमी तिथिको आरम्भसँगै उपवास शुरु हुन्छ । नवमी तिथिको आगमन भएपछि पूजापाठ गरेर जितिया पर्वको समापन हुन्छ । सप्तमी तिथिको उत्तरार्धमा वर्तालु महिला ओङ्गठन गर्ने गरिन्छ । वर्त बस्नुअघि रात्रिको समयमा दही, च्यूरा, मिठाइलगायतका सामग्री भोजनको रुपमा ग्रहण गरिन्छ । त्यसलाई ‘ओङ्गठन’ भनिएको हो । ओङ्गठनको समयमा परिवारका सम्पूर्ण सदस्यले भोजन गर्ने चलन पनि रहेको छ ।
तिथिको समयमा हेरफेर भएको अवस्थामा वर्तालुलाई ३६ घण्टासम्म उपवासमा बस्नुपर्ने हुन्छ । उपवासको अवधिमा थुक पनि निल्न नहुने मान्यता छ । तर, यसपल्ट उपवासको अवधि सोमबार बिहान ३ बजेदेखि शुरु भई बुधबार बिहान ८ बजेसम्म अर्थात करीब २९ घण्टा रहेको छ । सप्तमी तिथिमा जलाशयमा स्नान गरी सूर्यदेवलाई जल अर्पन गरेर पर्वको सङ्कल्प लिने गरिन्छ र सोही दिन वर्तालु महिलाले कोदोको रोटी र माछा खाने गरिन्छ, भने विधवाले अरुवा–अरुवाइन खाने गर्छन् । यसअघि, वर्तालुले नजिकैको पोखरीमा स्नान गरी घिरौंलाको पातमा पीना र तेल राखेर जिमुतवाहन देउतालाई अर्पन गर्छन् । यसका साथै पर्वको सङ्कल्प पनि गर्छन् । पितृ पक्षमा यो पर्व मनाइने गरिएकाले मैथिल ब्राह्मणी वर्तालुले आ–आफ्ना दिवङ्गत सासू र आमाको मोक्षका लागि सप्तमी तिथिमै अन्य गोत्रकी ब्राह्मणीलाई निम्तो दिएर अनिवार्य रुपमा भोजन गराउने नियम छ । भोजन गर्ने महिलालाई ‘पितराइन’ भन्ने गरिन्छ । बुधवार राती देखि शुक्रवार विहान ७ बजे सम्म कठोर ब्रत बसि पारण बिधी भएपछि जितिया समापन हुने छ ।
किन गरिन्छ कठोर व्रत ?
सन्तानलाई अकाल मृत्युबाट जोगाउन र दीघार्युका लागि माता जिर्मूतवाहन देउताको कठोर उपवास गर्ने गरिएको हो । यस सम्बन्धमा भविष्य पुराणमा अराध्यदेव महादेवसमक्ष पार्वतीले यस्तो कुन वर्त वा तपस्या गर्दा सन्तानको अकाल मृत्यु हुदैन् भनि राख्नुभएको जिज्ञासामा महादेवले जिर्मूतवाहनको नियम निष्ठाका साथ वर्त बसेको खण्डमा सन्तानको अकाल मृत्यु नहुने भनी बताए ।
को हुन जिमूतवाहन ?
भविष्यपुराणमा उल्लेख गरिएअनुसार राजा शालिवानका पुत्र जिमूतवाहनमाथि महादेवको असिम कृपा थियो । महादेवले नै जिर्मूतवाहनलाई बरदान दिएकाले सन्तानको अकाल मृत्युबाट बचाउनका लागि जितिया पर्वमा जिर्मूतवाहनको पूजा गरिन्छ । हिन्दूधर्ममा विभिन्न जनाबर र चराको विशेष महत्व दिएर पूजापाठ गर्ने परम्परा छ । गाई, परेवा, काग, कुकुर, हाँस, बाघ र मुसो लगायतको पूजा गरिन्छ भने यस पर्वमा स्यालनी र चिलको पूजा गर्ने गरिएको हो ।
वर्त बसेको दिनमा वर्तालु महिला जलाशयमा स्नान गरी सूर्यदेवलाई अघ्र्य अर्पन गर्छन् । त्यसपछि, घर पुगेर डाली ९टोकरी० भर्ने नियम रहेको छ । सो डालीमा फलपूmल, मिठाइ र नरिवल राखेर नयाँ बस्त्रले छोपेर पूजास्थलमा राख्ने गरिन्छ । पर्व सम्पन्न भएपछि नवमी तिथिमा पूजापाठ गरेर छोराछोरीबाट कपडा हटाएर प्रसादको रुपमा ग्रहण गरिन्छ । उपवासको दिन वर्तालुका साथै महिला एक ठाउँमा भेला भएर जितिया पर्वको कथा अनिवार्य रुपमा श्रवण गर्ने गरिन्छ । कथा श्रवण गरेर घर फर्केपछि आगनमा गाईको गोबरले लिपपोत गरी महादेवले पार्वतीलाई सुनाएको पूजाको विधिअनुरुप जिर्मूतवाहनको पूजा गर्छन् ।
जेठी शीलावतीको धनवानको घरमा र कर्पुरावतीको राजपरिवारमा विवाह भयो । जेठी शीलावतीलाई सात छोरा भयो तर, कान्छी कर्पुरावतीलाई छोरा भए पनि क्रमिक रुपमा मृत्युवरण गर्दै गयो । सोही कारणले कर्पुरावतीको जेठी शीलावतीसँग सम्बन्ध चिसिँदै गयो । केही समयपछि, जेठी शीलावतीले पूर्वजन्मको घटना कर्पुरावतीलाई सुनाउँदै वर्त भङ्ग गरेको कारणले छोरा जीवित नरहेको जानकारी गराइन् । सोही कारणले यो पर्व मनाउने बाचुञ्जेलसम्म पर्व खण्डित नहुने गरी नियमनिष्ठाका साथ मनाउने गर्छन् ।